कम्युनिस्ट पार्टीको अबको भूमिका भनेको समाजवाद निर्माणका निम्ति आन्दोलन र जनपरिचालन - Jhilko
जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालका विभाजित कम्युनिस्टहरु र विभाजित सर्वहारावर्गका प्रतिनिधिहरु यो एकतामा विश्वस्त भयौं । ऐतिहासिक आवश्यकतालाई बोध गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरुले एकता हासिल गरेका हौं । यसलाई हामीले असाधारण र ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिएका छौं । यसबाट संसारभरिका कम्युनिस्टहरु उत्साहित र खुशी पनि छन् । छरिएर रहेका नेपालका प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचको यो एकताले खासगरी कार्यकर्ता र जनता पनि खुशी र उत्साहित छन् ।
पार्टी एकता भएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएकोमा कार्यकर्ता, जनतामा चिन्ता पनि पैदा गरेको थियो । एकातिर जनता–कार्यकर्तामा एकताले पूर्णता नपाउँदै बीचैमा विभाजन हुने हो कि ? फेरि टुटफुट हुने र पुरानै ठाउँमा फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हामीले अनुभव गरेका हौं । अर्कोतिर एकता प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै गएको र कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रुपमा एकजुट नभएकाले हाम्रा दुश्मनहरुमा खुशीको लहर आउनु अस्वाभाविक होइन ।
यही सन्दर्भमा चन्द्रागिरि बैठकको विषय पनि आइहाल्यो । निश्चय पनि पार्टी एकताको सन्दर्भलाई लिएर केही समय अगाडि पार्टी स्थायी समितिको बैठक पनि बसेको थियो । त्यो बैठकको एकसूत्रीय एजेण्डा भनेको पार्टी एकताकै विषय थियो । पार्टी एकताले किन पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न स्थायी समितिमा पनि उठ्यो । झण्डै एघार दिनसम्म यही विषयमा केन्द्रित भएर त्यो बैठक चल्यो । यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, बैठक अन्तिममा यो एकता प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो पूर्ण दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । र, एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर सिङ्गो पार्टी बाहिर पनि र भित्र पनि एउटा अभियानमा जानुपर्छ भन्ने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
एकतालाई छिट्टै पूर्णता दिने निर्णय गरेको त्यो बैठक बसेको पनि निकै समय गुज्रियो । चन्द्रागिरि बैठक पनि यही सन्दर्भको निरन्तरता थियो– पार्टी एकतालाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने ? स्थायी समितिले मेरै संयोजकत्वमा एकताको प्रस्ताव तयार गर्नका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाएको थियो । पछि त्यसलाई हामीले विघटन ग¥यौं र यो जिम्मेवारी सचिवालयले लिनुपर्छ भन्यौं । यो एकताको विषय सामान्य अवस्थाको जस्तो होइन । यो असामान्य अवस्था भएको हुनाले एकता प्रक्रियाको जिम्मेवारी सचिवालयले लिनुपर्छ र यसको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पनि दुई जना अध्यक्षले नै लिनुपर्छ निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । सामान्यतः यतिबेला यो जिम्मेवारी सचिवालयलाई छ तर ठोस रुपमा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई थियो । चन्द्रागिरिको बसाइ पनि यसैसँग सम्बन्धित थियो ।
चन्द्रागिरिमा भएको खास सल्लाह वा छलफलमा पार्टीको महासचिवको हिसावले विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो । म चाहिं विवाद समाधान कार्यदलको संयोजक भएको र विगतमा पनि हामी दुई जना रहने गरी विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको थियो, त्यसमा भएको नाताले सहभागी बनेको थिएँ । हामीले त्यतिबेला पनि केही गृहकार्य गरेका थियौं । त्यसबारे दुई अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र पार्टी एकतालाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिनका लागि अध्यक्षहरुलाई सहयोग पुग्ने हिसावले चन्द्रागिरि छलफलमा हामी सहभागी भएका थियौं । आउनै लागेको पार्टी स्थापना दिवसभन्दा अगाडि नै एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने सल्लाह चन्द्रागिरिमा भएको हो ।
दुई अध्यक्षले अहिले गरेको गृहकार्यमा धेरैजसो विषय टुङ्गिएका छन् । बाँकी विषयलाई पनि छिट्टै टुङ्गो लगाएर पार्टी स्थापना दिवस बैशाख ९ गते अगाडि नै एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सल्लाह चन्द्रागिरिमा भएको हो । एकता–प्रक्रियालाई कसरी छिट्टै पूर्णता दिने भन्ने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पनि गम्भीर रुपमा चिन्तित हुनुहुन्छ । जनसंगठन र पार्टी एकताका विषयमा पनि विगतमा थुप्रै कार्यदलहरु बनेका थिए ।
एकता किन ग¥यौं ?
नेपालको कम्युनिस्ट र जनवादी आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुग्यो । सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी क्रान्ति÷आन्दोलन आधारभूत रुपमा सम्पन्न भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । कम्युनिस्टको नेतृत्वमा ००६ सालदेखि जुन आन्दोलन हुँदै आयो, हामीले सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्र र राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो पनि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
कम्युनिस्टहरुको अगाडिको चुनौति वा लक्ष्य के हो त ? राजनीतिक रुपमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको अवस्थामा कम्युनिस्टहरुले केका निम्ति संघर्ष गर्ने ? परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका के हुने ? भन्ने प्रश्नहरु उठे ।
कम्युनिस्ट पार्टीको अबको भूमिका भनेको समाजवाद निर्माणका निम्ति आन्दोलन र जनपरिचालन गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अबको लक्ष्य प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि (संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्र)को रक्षा गर्दै समाजवाद निर्माण गर्ने हो । अबको हाम्रो राजनीतिक र रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हुनुपर्छ । त्यसको निर्माण र स्थापनाको निम्ति त्यही अनुसारको शक्तिशाली नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालका विभाजित कम्युनिस्टहरुलाई एकजुट गरेर एउटा शक्तिशाली नेतृत्व निर्माण गर्न जरुरी छ भनेर हामीले पार्टी एकताको आवश्यकता महसुस ग¥यौं र त्यही अवधारणा अनुसार यो एकता भएको हो ।
लक्ष्य हासिल गर्न एकरुपता र त्यसका लागि नयाँ र शक्तिशाली पार्टी–संगठन–नेतृत्वको आवश्यकता पूरा गर्न यो एकता भएको हो । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हो । अबको वर्गसंघर्ष समाजवादको मार्गमा मुख्य बाधकका रुपमा आउनसक्ने दलाल, नोकरशाह र एकाधिकारवादी पुँजीपतिका विरुद्ध हुनेछ । समाजवादको वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार गर्नका लागि विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिंदै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण र संरक्षण गर्नुपर्छ । औद्योगिक, कृषि क्रान्ति गर्नु अनिवार्य छ । यसरी मात्र समाजवादका लागि वस्तुगत आधार तयार गर्न सकिन्छ । यतिबेला हामीले अपनाइरहेको कार्यनीति सडक, सदन र सरकारको मोर्चाबाट समाजवादको वस्तुगत आधार तयार गर्नका लागि हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा समाजवादको आधार निर्माणका लागि हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको आधार आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, त्यसका लागि उत्पादक शक्तिहरुको विकास हो । अझै ठोस रुपमा भन्नुपर्दा औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु हो । अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन प्रणालीले समाजवादको लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउन सक्दैन । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशमा विद्युत उत्पादन, पूर्वाधार विकासलाई समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिसँग जोडेर तीब्र विकास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यी सबै सम्भावनाको अवरोधक भनेको दलाल, नोकरशाही र एकाधिकार पुँजीपति नै हुन् । पार्टी एकताको प्रष्ट उद्देश्य यिनै तत्वविरुद्धको प्रहार हो– समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ।
भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र तस्करहरु दलाल पुँजीपति हुन् । यी राष्ट्रिय पुँजीका विरोधी हुन् । समाजवाद निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिसँग निम्न पुँजीपति र किसानको मोर्चा बनाएर औद्योगिक क्रान्ति गर्नु अनिवार्य बनेको छ । हाम्रो यो उद्देश्य र लक्ष्यलाई चुनावी परिणाममार्फत् जनताले अनुमोदन गरेका छन् । विकास र स्थिरताका निम्ति शान्तिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अभिमत जनताले प्रस्ट रुपमा व्यक्त गरेका छन् । जनताको यही मतलाई सम्मान गर्दै नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकार अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । चुनावी घोषणापत्र अनुसार आफ्नो पहिलो वर्षमा सरकारले जुन योजना बनायो, आउने २५ वर्षभित्रमा नेपाललाई एउटा विकसित मुलुकका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यलाई मूर्त रुप दिने कोसिस गरेको छ ।
भर्खरै मात्र सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत् नेपाललाई विकासको तीब्र गतिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास थालिएको छ । त्यस सम्मेलनमा सरकारले एउटा आधार पत्र पनि प्रस्तुत गरेको थियो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तयार हुँदैछ । यतिबेला हामी अति कम विकसित मुलुकका रुपमा गणना भइरहेका छौं । अब विकसशील हुँदै आउने २५ वर्षमा नेपाललाई समृद्ध र विकसित मुलुकमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य नेकपा नेतृत्वको सरकारले लिएको छ । बजेट भनेको विकासको योजना हो । सरकारको लक्ष्यलाई आगामी बजेटमा अझै मूर्त रुपमा प्रस्तुत गरिनेछ । सरकार यतिबेला योजना निर्माणमा पनि उत्तिकै खटिरहेको छ । विगतका अनुभवको जगमा टेकेर हाम्रा सांसदहरुले आगामी दिनमा जनताका बीचमा गएर कहाँ, कस्ता विकास र पूर्वाधारका योजना आवश्यक छ भन्ने राय–सुझाव लिइरहेका छन् । त्यही आधारमा विकास र बजेटको योजना तर्जुमा गर्नका लागि सरकार कटिबद्ध छ ।
विकासका लागि शान्ति अपरिहार्य छ तर शान्ति–प्रक्रिया अझै पूर्ण भएको छैन । शान्ति–प्रक्रियालाई पूर्णता दिंदै देशमा सुदृढ स्थायित्व कायम गर्ने चुनौति पनि सरकारका अगाडि छ । जनक्रान्तिद्वारा पराजित गणतन्त्र र संघीयताविरोधीहरु सल्बलाइरहेका छन् । देशलाई हिजोकै अवस्था र व्यवस्थातिर फर्काउने कोसिस उनीहरु गरिरहेका छन् । विभिन्न नाम र बहानामा देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने यस्ता तत्वहरु समृद्धि र समाजवादका विरोधी हुन् । शान्ति, जनवाद र समाजवादविरोधीहरुलाई निस्तेज गर्नु पनि यतिबेला सरकारको दायित्व हो । देशभित्रका प्रतिगमनकारी र विदेशीको स्वार्थमा धार्मिक र साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने प्रयास कायमै छ । विखण्डनकारी र अतिवादी तत्वहरु पनि यतिबेला सक्रिय छन् । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अतिवादी र विखण्डनकारीहरुलाई नै बल पुग्छ । सरकार यसतर्फ पनि सजग छ ।
विकास–निर्माणलाई तीब्र बनाउन सकिएन र बेरोजगारी हटाउन सकिएन भने स्वाभाविक रुपमा यस्ता तत्वले मौलाउने अवसर पाउँछन् । विकास–निर्माणको मुख्य बाधक भनेको भ्रष्ट, दलाल, नोकरशाही, राजस्व ठगी गर्ने र भूमाफियाहरु त्यस्ता तत्व हुन्; जसले विकासका काम रोकिराखेका हुन्छन् । विकासमा अवरोध गर्दा र राष्ट्रिय पुँजीको सञ्चयमा अवरोध पु¥याउँदा मात्र उनीहरुको स्वार्थ पूरा हुन्छ । पार्टी एकताको उद्देश्य यस्ता तत्वलाई निस्तेज गर्ने पनि हो । यसो गर्न सकेमात्र पार्टी एकताको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । पार्टी र समाजमा समेत प्रभावी बनेको यस्तो प्रवृत्तिलाई निस्तेज र निरुत्साहित गर्न सकिएन भने समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न ।
किसानको हित, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, जलविद्युत र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा तीब्र विकास गरेर मात्रै पार्टी एकताको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । यिनै विषयलाई ध्यान दिंदै सरकारले भन्सारलगायतका नीति अवलम्बन गर्ने कोसिस गर्छ । हामीले राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षणका लागि त्यस किसिमका कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेछ । सामाजवादका निम्ति बाधक कतिपय सामाजिक व्यवस्था अझै कायम छन् । छाउपडी, छुवाछुत लगायतका प्रथा संविधानतः गैरकानुनी भए पनि व्यवहारमा कायम छन् । बलात्कार, अपहरण र हत्याजस्ता सामाजिक विकृति पनि समाजवादतर्फ बढ्नका लागि आधारभूत रुपमा बाधक हुन् । सामन्तवादका अवशेषका रुपमा रहेका यस्ता विकृति र अन्धविश्वास, महिला र पुरुषबीचका विभेदको अन्त्यका लागि अभियान चलाउनु पर्छ । यसका लागि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध बलियो पार्टी आवश्यक छ । समाजवाद प्राप्तिका लागि गठन भएको नेकपाले संगठित रुपमा यस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध अभियानात्मक संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र लडाइँ लड्नुपर्नेछ ।
यतिबेला हामी समाजवादका लागि संघर्षको चरणमा छौं । हाम्रो सन्दर्भमा औद्योगिक, कृषि क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर मात्रै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार निर्माण हुन्छ । कम्युनिस्टको अन्तिम लक्ष्य भनेको साम्यवाद हो । साम्यवादमा पुगिसकेपछि अरु त अरु कम्युनिस्ट पार्टी नै रहदैन । वर्गीय हित भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्तावना हो । साम्यवादपछि कुनै वर्ग हुँदैन । वर्ग नै नभएपछि कुनै राजनीतिक लक्ष्य पनि हुँदैन । समाजमा वर्गको अस्तित्व रहँदासम्म मात्र वर्गस्वार्थको रक्षाका लागि पार्टी गठन हुने हो । सामन्त, पुँजीपतिको स्वार्थका लागि उनीहरुले पार्टी बनाएजस्तै सर्वहारावर्गको स्वार्थ रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुने हो । वर्गसंघर्ष भनेको विपरीत वर्गका बीचको लडाइँ हो ।
म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु कि यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समाजवादको यात्रातर्फ बढिरहेको छ । यसलाई अवरोध गर्न खोज्ने शक्तिहरु पनि छन् । अबको संघर्ष समाजवादतिर देशलाई लग्ने कि पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने हो । एक वर्ष अगाडि भएको पार्टी एकता समाजवादको बाटो र लक्ष्यलाई सहज बनाउन र समाजवादका बाधकहरुलाई पञ्छाउन सजिलो बनाउनका लागि हो । सर्वहारावर्गको शक्तिशाली नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्रै समाजवादतिर मुलुकलाई डो¥याउन सकिन्छ भन्ने भावका साथ हामी एकताबद्ध भएका हौं । वस्तुगत रुपमा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाएर मात्रै समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । पार्टी एकतालाई छिट्टै पूर्णता दिने हाम्रो प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो । (हेटौंडामा भएको एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार) समयबद्ध साप्ताहिक
कालिकोटका थुनुवा नवीन शाही ठकुरीलाई भेट्न जाँदा उनका भाइ पुजन बम ठकुरीले चाउचाउको...
सन् २००० मा अमेरिकालाई दादुरामुक्त घोषणा गरेयता सन् २०१९ मा सबैभन्दा बढी ६९५ दादुराका...
सर्भे सकिएपछि यसको अध्ययनका लागि तीन महिनाको समय लाग्ने छ । सो अवधिपछि धेरै सम्भावना...
बाल गायीका कमला घिमिरेको 'चिया छनेको' बजारमा
यो गित युट्युवको ट्रेण्डिङको दोस्रो नम्बरमा आएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको उक्त...